Hepatitis B Vaccination - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” B ပိုးကာကှယျဆေးထိုးပွီးတာနဲ့ လုံလောကျပါရဲ့လား “
အသညျးရောငျအသားဝါဘီပိုးရောဂါ (Hepatitis B ရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှကွေောငျ့ အသညျးရောငျ Bပိုးကာကှယျဆေးကို ထိုးနှံလာကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စနဈတကထြိုးဖို့နဲ့ ကာကှယျဆေးက မိမိကို ကာကှယျမှု အပွညျ့အဝ ပေးနိုငျဖို့ သတိပွုရမယျ့ ထပျမံလုပျဆောငျရမယျ့အခကျြတှေ ရှိပါသေးတယျ။
>>>အသညျးရောငျ Bပိုးက ဘာလဲ ?
Hepatitis B လို ချေါတဲ့ အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီပိုး ဟာ အသညျးရောငျဗိုငျးရပျဈပိုး ၅မြိုးထဲကတဈခု ဖွဈပွီး ဘီပိုးနဲ့ စီပိုးဟာ နာတာရှညျရောဂါတှေ ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ရကျခဏတာ ဖွဈတဲ့ အသညျးရောငျခွငျး ( acute hepatitis) ကတော့ ရောဂါ လက်ခဏာ ပွနိုငျပါတယျ။ Acute Hepatitis ရောဂါသညျမြားသညျ နာတာရှညျရောဂါသို့ ကူးပွောငျးလမေ့ရှိဘဲ Bပိုးပြောကျကငျးသှားလရှေိ့ပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမှ မှေးကငျးစကလေးကို မကူးစကျအောငျ ကာကှယျရနျလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျောမှေးကငျးစကလေးကို B ပိုးကူးစကျသှားလြှငျ ဆိုးရှားသော နာတာရှညျအသညျးရောဂါကို >90% ခံစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Bပိုးရောဂါသညျ ကိုယျဝနျဆောငျမြားအနဖွေငျ့ မိမိ၏ကလေးကို Bပိုးမကူးစကျအောငျ ကြှမျးကငျြသော အသညျးအထူးကုဆရာဝနျကွီးမြားနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးသငျ့ပါသညျ။နာတာရှညျ အသညျးရောငျခွငျး (chronic hepatitis) ကို ခံစားရတဲ့အခါ ရောဂါရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှေ (အသညျးခွောကျခွငျး၊အသညျးကငျဆာ) စတဲ့ complication တှပေျေါလာတဲ့ အထိ ရောဂါလက်ခဏာမပွဘဲ ရှိတတျပါတယျ။
အသညျးရောငျ အသားဝါ Bပိုး အဓိက ကူးစကျတာကတော့ ရောဂါပိုးပါတဲ့သှေးရယျ တခွားသော ခန်ဓာကိုယျကထှကျတဲ့ အရညျ (တံတှေး စသညျ ) တို့မှ ကူးစကျပါတယျ။
ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သှေးနဲ့ ထိတှမေိ့ခွငျး
မှေးဖှားစဉျမှာ မှေးလမျးကွောငျးမှ တဆငျ့ မိခငျထံမှ ကလေးဆီသို့ ကူးစကျခွငျး
(ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှလေညျး) ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ဆေးထိုးအပျ စူးခွငျး ၊ မူးယဈဆေး သုံးစှဲသူမြားတှငျ ဆေးထိုးအပျကို မြှဝသေုံးစှဲခွငျး
Bပိုးရှိတဲ့ လူနာနှငျ့ လိငျဆကျဆံခွငျး ( အထူးသဖွငျ့ အကာအကှယျမဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျး (လိငျတူ /လိငျကှဲ)) မှတဆငျ့ ကူးစကျတာ (ဆကျဆံရာမှာလညျး ပါးစပျ မအင်ျဂါ စအို တို့မှ မညျသညျနှငျ့ဆကျဆံသညျဖွဈစေ)
မုတျဆိတျမှေး ရိတျသညျ့ ဓား စသညျ့ ရောဂါပိုးပါသော သှေးစကနျြနိုငျသညျ့ တကိုယျရသေုံးပစ်စညျးမြားကို မြှဝသေုံးစှဲခွငျးတို့မှ အဓိက ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
>>>Bပိုး ကူးစကျတာကို ဘယျလို ကာကှယျရမလဲ ?
အသညျးရောငျ အသားဝါ Bပိုး ကို ကာကှယျဖို့ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးကတော့ ကာကှယျဆေးထိုးဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သငျတနျးကြောငျး /အဖှဲ့စညျးတဈခုထဲ အတူတူနထေိုငျရသူတှေ
လိငျမှုဆိုငျရာ မကွာခဏ ထိတှမှေု့ရှိသူတှနေဲ့
မိသားစုထဲမှာ Bပိုး ရှိနသေူတှေ
ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ က ပိုပွီး အရေးတကွီးထိုးဖို့ လိုပါတယျ။
>>>ကာကှယျဆေးကို ဘယျလို ထိုးရမလဲ ?
ကာကှယျဆေးကို သုံးကွိမျ ထိုးရမှာဖွဈပါတယျ။ ပထမတဈကွိမျထိုးပွီးတာနဲ့ Bပိုးကနေ ကာကှယျမှုရတယျလို့ ယူဆလို့ မရသလို ဆေး သုံးကွိမျထိုးပွီးတာနဲ့လညျး ကာကှယျမှု အပွညျ့အဝရတယျလို့ စိတျခလြို့ မရပါဘူး။ အဲဒီအတှကျ Bပိုး ကာကှယျဆေးထိုးခါနီးတိုငျး တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျတှနေဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးရမှာဖွဈပါတယျ။
ကာကှယျဆေး မထိုးခငျ မိမိတှငျ Bပိုး ရှိမရှိစဈဆေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အသညျးရောငျ အသားဝါ Bပိုး ရှိနရေငျ (Hbs Ag – positive) ဆိုလြှငျ ကာကှယျဆေးထိုးလို့မရပါ။ မရှိသူ ( Hbs Ag – negative) မှသာလြှငျ ဘီပိုး ကာကှယျဆေးထိုးလို့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
(HbsAg Test လုပျပွီး ၁လအတှငျး Bပိုးကာကှယျဆေးထိုးရမညျဖွဈသညျ)
ကာကှယျဆေးထိုးရာမှာ ပုံမှနျအခြိနျဇယားအတိုငျးဆးထိုးခွငျးRoutine vaccination schedule ( ဆေးစထိုးသညျ။ ထို့နောကျ တဈလအကွာ ။ ထို့နောကျ ၆ လအကွာ တှငျထိုးသညျ (0,1,6) ) နှငျ့ အမွနျအခြိနျဇယားဖွငျ့ ဆေးထိုးခွငျး ( ဆေးစထိုးသညျ၊ တဈလအကွာမှာထိုးသညျ ၊၂လအကွာမှာထိုးသညျ ၊ ထို့နောကျ ၁နှဈအကွာမှာ ထိုးသညျ (0,1,2,12) ) ဟူ၍ နှဈမြိုးရှိပါတယျ။
ဆေးထိုးပွီးရုံဖွငျ့ မပွီးသေးပါဘူး။ ထိုးပွီးတဲ့နောကျ မိမိရဲ့ သှေးထဲမှာ ဘီပိုးအတှကျ ခုခံကာကှယျပေးနိုငျသောပစ်စညျး ( Anti Hbs ) ထှကျမထှကျနှငျ့ ထှကျလြှငျလညျး လုံလောကျသော ပမာဏရှိမရှိ စဈဆေးပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
-Anti Hbs 1000 အထကျရှိမှသာ လုံလောကျသော ကာကှယျမှု ရရှိပါတယျ။ ( ဒါဆိုရငျတော့ ၅နှဈအကွာမှာ ထပျမံဈဆေးရမှာ ဖွဈပါတယျ )
-Anti Hbs 100 -1000 ဆိုရငျတော့ ကာကှယျမှု ရှိသညျ ။ ( Anti Hbs က 500 အထကျ ဆိုရငျတော့ ၁နှဈကွာလြှငျ ပွနျလညျစဈဆေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။)
-Anti – HBs 100 အောကျ ဆိုလြှငျတော့ ကာကှယျမှုက မလုံလောကျပါ ။ ( booster dose ချေါ အားဖွညျ့ကာကှယျဆေးတဈလုံး ထပျမံ ထိုးနှံရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ပွီးမှ ထပျမံပွီး သှေးစဈကွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ)
-Anti Hbs 10 အောကျဆိုရငျတော့ Bပိုး ကာကှယျမှု လုံးဝမရှိတဲ့ အတှကျ ကာကှယျဆေးကို အစကနေ ပွနျထိုးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
>>> ကာကှယျဆေး အမြိုးအစား
B ပိုးကာကှယျဆေးကို ထုတျလုပျပုံ အပျေါမှာ မူတညျပွီး ၂မြိုး ခှဲခွားပါတယျ။ human type နဲ့ yeast type ဖွဈပွီး recombinant DNA technology အသုံးပွုပွီး yeast cells တှကေနေ ထုတျလုပျထားတဲ့ အမြိုးအစားက ပိုမိုကောငျးမှနျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ yeast ကနေ ထုတျတဲ့ အမြိုးအစားကို ထိုးနှံဖို့ ပိုပွီး recommend ပေးခငျြပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကာကှယျဆေးထိုးမယျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောတိုငျပငျပွီးမှထိုးရနျ လိုအပျပါတယျ။ရနျကုနျမွို့မှာ ပငျလုံဆေးရုံကွီးတှငျလညျး ကြှမျးကငျြသော အသညျးအထူးကုဆရာဝနျကွီးမြားနှငျ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျ၍ စဈဆေးကုသနိုငျပါတယျ။
၁။ B ပိုးမရှိသူတိုငျး B ပိုးကာကှယျဆေးကို စနဈတကထြိုးထားရပါမယျ။
၂။ Bပိုးကာကှယျဆေးဟာ ဆေးထိုးပွီးတာနဲ့ မပွီးပါဘူး။ ကာကှယျမှုဟာ ထိရောကျသလား ပွနျလညျ စဈဆေးရပါမယျ။
၃။ ငါးနှဈ တဈကွိမျ (အနညျးဆုံး ပွနျလညျ စဈဆေးရပါမယျ) ။
” B ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ လုံလောက်ပါရဲ့လား “
အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးရောဂါ (Hepatitis B ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင့် အသည်းရောင် Bပိုးကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်တကျထိုးဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဆေးက မိမိကို ကာကွယ်မှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်ဖို့ သတိပြုရမယ့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။
>>>အသည်းရောင် Bပိုးက ဘာလဲ ?
Hepatitis B လို ခေါ်တဲ့ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး ဟာ အသည်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ၅မျိုးထဲကတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဘီပိုးနဲ့ စီပိုးဟာ နာတာရှည်ရောဂါတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရက်ခဏတာ ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောင်ခြင်း ( acute hepatitis) ကတော့ ရောဂါ လက္ခဏာ ပြနိုင်ပါတယ်။ Acute Hepatitis ရောဂါသည်များသည် နာတာရှည်ရောဂါသို့ ကူးပြောင်းလေ့မရှိဘဲ Bပိုးပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ မွေးကင်းစကလေးကို မကူးစက်အောင် ကာကွယ်ရန်လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်မွေးကင်းစကလေးကို B ပိုးကူးစက်သွားလျှင် ဆိုးရွားသော နာတာရှည်အသည်းရောဂါကို >90% ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Bပိုးရောဂါသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအနေဖြင့် မိမိ၏ကလေးကို Bပိုးမကူးစက်အောင် ကျွမ်းကျင်သော အသည်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။နာတာရှည် အသည်းရောင်ခြင်း (chronic hepatitis) ကို ခံစားရတဲ့အခါ ရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ (အသည်းခြောက်ခြင်း၊အသည်းကင်ဆာ) စတဲ့ complication တွေပေါ်လာတဲ့ အထိ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
အသည်းရောင် အသားဝါ Bပိုး အဓိက ကူးစက်တာကတော့ ရောဂါပိုးပါတဲ့သွေးရယ် တခြားသော ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ အရည် (တံတွေး စသည် ) တို့မှ ကူးစက်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သွေးနဲ့ ထိတွေ့မိခြင်း
မွေးဖွားစဉ်မှာ မွေးလမ်းကြောင်းမှ တဆင့် မိခင်ထံမှ ကလေးဆီသို့ ကူးစက်ခြင်း
(ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်း) ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ဆေးထိုးအပ် စူးခြင်း ၊ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူများတွင် ဆေးထိုးအပ်ကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း
Bပိုးရှိတဲ့ လူနာနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း ( အထူးသဖြင့် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း (လိင်တူ /လိင်ကွဲ)) မှတဆင့် ကူးစက်တာ (ဆက်ဆံရာမှာလည်း ပါးစပ် မအင်္ဂါ စအို တို့မှ မည်သည်နှင့်ဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေ)
မုတ်ဆိတ်မွှေး ရိတ်သည့် ဓား စသည့် ရောဂါပိုးပါသော သွေးစကျန်နိုင်သည့် တကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်းတို့မှ အဓိက ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
>>>Bပိုး ကူးစက်တာကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ ?
အသည်းရောင် အသားဝါ Bပိုး ကို ကာကွယ်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကျောင်း /အဖွဲ့စည်းတစ်ခုထဲ အတူတူနေထိုင်ရသူတွေ
လိင်မှုဆိုင်ရာ မကြာခဏ ထိတွေ့မှုရှိသူတွေနဲ့
မိသားစုထဲမှာ Bပိုး ရှိနေသူတွေ
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ က ပိုပြီး အရေးတကြီးထိုးဖို့ လိုပါတယ်။
>>>ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်လို ထိုးရမလဲ ?
ကာကွယ်ဆေးကို သုံးကြိမ် ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ကြိမ်ထိုးပြီးတာနဲ့ Bပိုးကနေ ကာကွယ်မှုရတယ်လို့ ယူဆလို့ မရသလို ဆေး သုံးကြိမ်ထိုးပြီးတာနဲ့လည်း ကာကွယ်မှု အပြည့်အဝရတယ်လို့ စိတ်ချလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီအတွက် Bပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးခါနီးတိုင်း တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေး မထိုးခင် မိမိတွင် Bပိုး ရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါ Bပိုး ရှိနေရင် (Hbs Ag – positive) ဆိုလျှင် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့မရပါ။ မရှိသူ ( Hbs Ag – negative) မှသာလျှင် ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(HbsAg Test လုပ်ပြီး ၁လအတွင်း Bပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်)
ကာကွယ်ဆေးထိုးရာမှာ ပုံမှန်အချိန်ဇယားအတိုင်းဆးထိုးခြင်းRoutine vaccination schedule ( ဆေးစထိုးသည်။ ထို့နောက် တစ်လအကြာ ။ ထို့နောက် ၆ လအကြာ တွင်ထိုးသည် (0,1,6) ) နှင့် အမြန်အချိန်ဇယားဖြင့် ဆေးထိုးခြင်း ( ဆေးစထိုးသည်၊ တစ်လအကြာမှာထိုးသည် ၊၂လအကြာမှာထိုးသည် ၊ ထို့နောက် ၁နှစ်အကြာမှာ ထိုးသည် (0,1,2,12) ) ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ဆေးထိုးပြီးရုံဖြင့် မပြီးသေးပါဘူး။ ထိုးပြီးတဲ့နောက် မိမိရဲ့ သွေးထဲမှာ ဘီပိုးအတွက် ခုခံကာကွယ်ပေးနိုင်သောပစ္စည်း ( Anti Hbs ) ထွက်မထွက်နှင့် ထွက်လျှင်လည်း လုံလောက်သော ပမာဏရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
-Anti Hbs 1000 အထက်ရှိမှသာ လုံလောက်သော ကာကွယ်မှု ရရှိပါတယ်။ ( ဒါဆိုရင်တော့ ၅နှစ်အကြာမှာ ထပ်မံစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် )
-Anti Hbs 100 -1000 ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်မှု ရှိသည် ။ ( Anti Hbs က 500 အထက် ဆိုရင်တော့ ၁နှစ်ကြာလျှင် ပြန်လည်စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
-Anti – HBs 100 အောက် ဆိုလျှင်တော့ ကာကွယ်မှုက မလုံလောက်ပါ ။ ( booster dose ခေါ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံး ထပ်မံ ထိုးနှံရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးမှ ထပ်မံပြီး သွေးစစ်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)
-Anti Hbs 10 အောက်ဆိုရင်တော့ Bပိုး ကာကွယ်မှု လုံးဝမရှိတဲ့ အတွက် ကာကွယ်ဆေးကို အစကနေ ပြန်ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
>>> ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစား
B ပိုးကာကွယ်ဆေးကို ထုတ်လုပ်ပုံ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ၂မျိုး ခွဲခြားပါတယ်။ human type နဲ့ yeast type ဖြစ်ပြီး recombinant DNA technology အသုံးပြုပြီး yeast cells တွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အမျိုးအစားက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါကြောင့် yeast ကနေ ထုတ်တဲ့ အမျိုးအစားကို ထိုးနှံဖို့ ပိုပြီး recommend ပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှထိုးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ ပင်လုံဆေးရုံကြီးတွင်လည်း ကျွမ်းကျင်သော အသည်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ စစ်ဆေးကုသနိုင်ပါတယ်။
၁။ B ပိုးမရှိသူတိုင်း B ပိုးကာကွယ်ဆေးကို စနစ်တကျထိုးထားရပါမယ်။
၂။ Bပိုးကာကွယ်ဆေးဟာ ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ကာကွယ်မှုဟာ ထိရောက်သလား ပြန်လည် စစ်ဆေးရပါမယ်။
၃။ ငါးနှစ် တစ်ကြိမ် (အနည်းဆုံး ပြန်လည် စစ်ဆေးရပါမယ်) ။